‘बलात्कृत हुन’ चितवनबाट स्कुटी चढेर पोखरा ! « Nepali Digital Newspaper
७ श्रावण २०७७, बुधबार ०७:४७
सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी राजेन्द्र अधिकारी अहिले प्रहरीको थुनामा छन् । केही दिनअघिसम्म पोखराको लामापाटनस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको हुल तथा दङ्गा ब्यवस्थापन शिक्षालयका प्रमुख रहेका उनी बेला–बेलामा आउजाउ गर्ने महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा थुनामा परेका हुन् । प्राप्त जानकारीअनुसार गत असार ३१ गते बुधबार बिहान ९.१५ बजे ती महिला स्कुटी चढेर एसएसपी अधिकारीलाई भेट्न सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक पुगेकी थिइन् । उनी ब्यारेकको गेटमा पुग्दा एसएसपी ब्यारेकबाहिर थिए । गेटमा ड्युटी बसेका प्रहरीले ‘कसलाई भेट्न आउनुभएको ? इन्ट्री गर्नुपर्छ’ भन्दा उनले आफू ‘एसएसपी साबको गेष्ट’ भएकाले खातामा इन्ट्री गर्नु नपर्ने जवाफ दिएकी थिइन् । उनलाई भित्र लगी चिया खुवाएर राख्दै गर्नका लागि गेटमा बसेका प्रहरीलाई एसएसपीको फोन आएपछि हाकिमसा’बको अतिथिका रूपमा उनलाई ससम्मान ब्यारेकभित्रको एसएसपी निवासमा लगिएको थियो ।